१० स्पष्ट संकेतहरू कसैले तपाईंलाई ईर्ष्यालु बनाउँछ (+ उनीहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने) - सम्बन्ध
१० स्पष्ट संकेतहरू कसैले तपाईंलाई ईर्ष्यालु बनाउँछ (+ उनीहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने)
ईर्ष्या त्यस्तो कुरा हो जुन हामी सबैले अब र फेरि अनुभव गर्छौं।
यो एक प्राकृतिक मानवीय भावना हो र, सानो डोजमा, डाह महसुस गर्नु भनेको हामीले आफैलाई पिट्नु हुँदैन।
यसले हाम्रो जीवनमा सोच्न र हामी किन यी भावनाहरू अनुभव गरिरहेको छ ठ्याक्कै बुझ्न हामीलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ।
संकेत छ कि एक केटी तपाइँ मा छ
यसले हामीलाई यो याद गरिरहेको छ कि हामीले के हराइरहेका छौं भन्ने बारे सोच्न लगाउँदछ जसले हामीलाई अरूको बारेमा त्यस्तो महसुस गर्न लगाउँछ।
तर ईर्ष्याको भावनात्मक अनुभूति र ईर्ष्यालु व्यक्ति हुनुमा ठूलो भिन्नता रहेको छ।
यदि तपाईंसँग नजिक भएको वा प्राय जसो कुराकानी गर्ने कसैसँग निरन्तर ईर्ष्यालु रहन्छ भने, यसले यसको असर लिन सक्छ, चाहे उनीहरू तपाईंको व्यावसायिक वा व्यक्तिगत जीवनको ईर्ष्यालु छन् वा दुवै।
निरन्तर भावना र ईर्ष्या प्रदर्शन कोहि मानिस वरिपरि हुन गाह्रो बनाउँछ र तपाईं दुई को बीचमा एक खराब भावना पैदा गर्न सक्दछ।
यसले उनीहरूलाई तपाईंप्रति नराम्रो व्यवहार गर्न अग्रसर गराउन सक्छ, वा उनीहरूले तपाईंको उपलब्धिहरू तल खेल्न प्रयास गर्न सक्छन् र तपाईंको जीवनमा राम्रो चीजहरू नराम्रो देखिन सक्छन्।
यसको अर्थ यो हुन सक्छ कि तपाईं उनीहरूको वरिपरि अप्ठ्यारो र दोषी महसुस गर्नुहुन्छ र आफ्नो जीवनको बारेमा राम्रा चीजहरू लुकाउन खोज्नु भएको पाउनुहुन्छ ताकि तिनीहरू पहिलेभन्दा पहिले तपाईंको भन्दा बढी ईर्ष्यालु हुँदैनन्।
र यसको अर्थ यो हुन सक्छ कि तपाईले आफ्नो सफलता र सूर्यको किरणको क्षणमा आनन्द लिनुहुन्न, किनकि त्यहाँ सधै कोही मानिसहरु लाई कालो बादल कास्ट गर्दै छन्।
तर यो पत्ता लगाउन कठिन हुन सक्दछ कि वास्तवमा कसैले तपाईलाई ईर्ष्या गर्छ वा तपाईले आफ्नो जीवनमा गरिरहनु भएको कुरा।
आखिर, हामीले स्थापना गरेजस्तै, हामी सबै ईर्ष्या बाहिर बारम्बार काम गर्छौं, र यो जान्न गाह्रो हुन सक्छ कि केवल एक क्षणको कमजोरी भएको कारण र वास्तवमा हामी ईर्ष्यालु छौं कि यो एक समस्या हो।
यदि तपाइँ कसैको व्यवहारलाई व्यवहार गर्न गाह्रो भइरहेको छ र यो ईर्ष्याको कारण हुन सक्छ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने, तब यी संकेतहरू खोज्दा तपाईंलाई यो पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ।
१. उनीहरूले तपाईलाई बधाई दिन्छन् - तर तपाईलाई थाहा छ यो विचित्र हो।
कोही जो तपाईको ईश्वरीय चीजहरूको लागि ईर्ष्यालु भइरहेको छ जुन तपाईको लागि राम्रो हुँदैछ प्रायः पहिलो व्यक्ति बन्नेछ बधाई प्रदान गर्न तपाईलाई जब कुनै राम्रो समाचार पाउनुहुन्छ ...
… तर, ती चीजहरूको बारेमा केहि भन्दछन् जुन अलि बन्द हुनेछ।
तिनीहरू ज्यादै ईर्ष्यालु नहुने सबैलाई ढ to्गमा उदा ove्ग पार्ने प्रयासमा लाग्न सक्छ।
वा ती चीजहरू खेल्न वा कम गर्न को लागी चीजहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ तपाईंले प्राप्त गर्नुभएका चीजहरू, यद्यपि तपाईंलाई पछाडि पट्टि लाग्ने जस्तो देखिन्छ।
उनीहरूले उत्कृष्ट काम गर्न सक्दछन् कि उनीहरूले तपाईलाई ईर्ष्या गर्दैनन् भन्ने बहानामा, तर गहिरो रूपमा तपाईलाई थाहा हुन्छ कि केही कुरा ठीक छैन।
२. तिनीहरूले यसलाई मन पराउँछन् जब वस्तुहरू तपाईंको लागि गलत हुन्छन्।
कसैको जीवन पूर्ण हुँदैन, र जब चीजहरू अपरिहार्य रूपमा गल्ती हुन्छन्, केवल तपाईंलाई ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरू यसको बारेमा साँच्चिकै खुशी हुन्छन्, चाहे उनीहरूले यसलाई लुकाउने प्रयास गरे पनि।
तपाईंले सायद यो सन्तुष्ट मुस्कानको रूपमा भेट्टाउनुहुनेछ जुन उनीहरूले तपाईंको अनुहार छिटो पखाल्छन् जब उनीहरूले तपाईंलाई देखिरहेको देख्छन्।
They. तिनीहरूले तपाइँका उपलब्धिहरूलाई लुकाउँछन्।
यदि चीजहरू तपाईंको लागि राम्रो हुँदैछ भने, उनीहरूले एक मिलियन कारणहरू पत्ता लगाउनेछन् कि त्यो कारण यो हो कि यो तपाईंको आफ्नै व्यक्तिगत योग्यतामा तल हुन सक्छ अघि स्वीकार गर्नु अघि।
तिनीहरूले यसलाई बाह्य परिस्थितिमा श्रेय दिनेछन र तपाईंलाई र अरू कोही पनि उनीहरूसँग कुरा गर्छन् पक्कै तपाईंले त्यो पदोन्नती पाउनुभयो किनकि तपाईं मालिकको साथ छेडखानी गर्नुभयो।
They. उनीहरू निश्चित गर्छन् कि तपाईलाई उनीहरूको सफलताको बारेमा थाहा छ।
जहाँसम्म उनीहरूले तपाईंलाई यो निश्चित गराउँदछ कि तपाईंको सफलताहरू उत्साहित हुने कुनै चीजहरू छैनन्, तिनीहरूले केहि सकारात्मक सकारात्मक प्रसारण पनि गर्नेछन्।
उपलब्धिहरू सबैभन्दा सानो सम्झौताको सबैभन्दा ठूलो मा बदलिन्छ।
They. उनीहरूले तपाईलाई गलत दिशा देखाउँछन्।
यदि तपाईं ईश्वरीय समस्यामा परेका कसैलाई फर्कनुहुन्छ भने तिनीहरूले जानाजानी तपाईंलाई नराम्रो सल्लाह दिन्छन्।
जे होस्, यदि तिनीहरू पहिले नै तपाईंसँग ईर्ष्यालु भइरहेछन् भने, उनीहरूले तपाईंलाई अझ राम्रो गर्न सक्ने कुरा बताउन गाह्रो हुन्छ।
तिनीहरू आफैंलाई त्यहाँ बाहिर राख्न वा नयाँ चीजहरू खोज्नबाट निरुत्साहित पार्ने तिनीहरूको मिसन पनि बनाउन सक्छन्।
यदि तपाइँ उत्साहपूर्वक योजना सुल्झाउनु भयो भने, तिनीहरू सायद पहिले व्यक्ति हुनुहुनेछ कि यसमा कुनै सम्भावित त्रुटिहरू देखा पर्नेछ, केवल हावालाई तपाईंको पालबाट बाहिर निकाल्न।
They. तिनीहरूले तपाईको प्रतिलिपि गरे।
यी अवस्थाहरूमा, यो पुरानो कथन याद राख्नु महत्वपूर्ण छ कि नक्कल चापलुसीको उच्च प्रकार हो तपाईको स्नायुहरूमा पर्न दिनुभन्दा।
यदि कसैले तपाईलाई ईर्ष्यालु बनाउँछ भने, यो सामान्यतया यो छ किनभने तिनीहरूलाई तपाईले के प्राप्त गर्नु भएको चाहिन्छ। तपाइँको प्रतिलिपि गरेर, तिनीहरू आफैंले यो प्राप्त गर्ने आशा राख्छन्।
कसरी एक सम्बन्ध मा ईर्ष्यालु हुन रोक्न
कसरी एक सकारात्मक तरीकाले नकारात्मक मान्छे संग डील गर्ने
कटु व्यक्तिको 10 बताउने संकेत (+ कसरी ह्यान्डल गर्ने)
They. उनीहरू तपाईका बारेमा कुरा गर्छन्।
यदि उनीहरू तपाईंको अनुहारमा रमाईलो छन्, तिनीहरूले तपाईंको ईर्ष्यालाई राम्रोसँग देखाउँछन् जब तपाईंको बारेमा अरूसँग कुरा गर्ने कुरा आउँछ।
केहि व्यक्तिले तपाईंलाई नराम्रो देखिने बनाउँदछ, तर केहि तपाईंको बारेमा स्पष्ट कुराकानी फैलाउन वा स्नाइड टिप्पणीहरू गर्न खुशी छन्। तिम्रो पछाडि ।
They. उनीहरूले तपाईलाई अन्य व्यक्तिको अगाडि नराम्रो देखिन्छन्।
तिनीहरूले यो चलाखीपूर्वक गर्न सक्दछन्, तर कसैले ईर्ष्यालु छ कसैले आफूलाई अरूको सामु अपमान गर्न, आफू राम्रो देखाउनको लागि र तपाईको आत्मविश्वास ढकढक्याउन सक्ने तरिकाहरू पत्ता लगाउन सक्छ।
Things। जब चीजहरू राम्रोसँग चल्दछन् तिनीहरू हराउँछन्।
जब तपाईं उच्चमा हुनुहुन्छ, तिनीहरू सायद तिनीहरूको अनुपस्थितिमा स्पष्ट हुनेछन्। तिनीहरू उपस्थित हुन चाहँदैनन् यदि तपाईं आफ्नो सफलताको उत्सव मनाउने निर्णय गर्नुहुन्छ।
जहाँ तपाईं पाउनुहुनेछ कि केहि साथीहरू मात्र तपाईंसँग मात्र हुन्छन् जब यो सबै सादा यात्रा गर्दछ, ईर्ष्यालु व्यक्तिको मामलामा विपरित हुन सक्दछ।
जब चीजहरू नराम्रो हुँदै जान्छन्, तिनीहरू कुर्सी तान्न र पपकोर्न खरीद गर्ने पहिलो व्यक्ति हुनेछन्।
१०. उनीहरू प्रतिस्पर्धी छन्।
तपाईं केहि गर्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरूले अझ राम्रो गर्न सक्दछन्। र तिनीहरू मिशनमा छन् यसलाई प्रमाणित गर्नका लागि!
यो विशेष गरी केस हुनेछ यदि तपाईंलाई ईर्ष्या गर्ने व्यक्ति तपाईंको साथ काम गर्ने कोही हो भने।
तिनीहरू जहिले पनि अंकहरू स्कोर गर्न प्रयास गर्छन् आफैंलाई प्रमाणित गर्न कि तिनीहरू तपाईं भन्दा असल छन्।
Busan हामीलाई रिहा गर्न को लागी ट्रेन
ईर्ष्यालु व्यक्तिसँग कसरी व्यवहार गर्ने
तपाईंको जीवनमा ईर्ष्यालु व्यक्तिसँग बस्नु कहिल्यै सजिलो हुँदैन।
कहिलेकाँही, तपाईं तिनीहरूसँग सम्पर्क बेवास्ता गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। तर त्यो सँधै त्यस्तो हुँदैन।
कुनै पनि कारणको लागि, तपाई यस व्यक्तिको सम्पर्कमा रहन सक्नुहुन्छ जुन तपाईको जीवनमा यस्तो नकारात्मक उपस्थिति बनिरहेको छ।
तर शुभ समाचार यो हो कि त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ चीजहरूलाई फर्काउन र ईर्ष्यालु लहरलाई तटस्थ तुल्याउन।
१. तिनीहरूलाई वास्तविक प्रशंसा र प्रशंसा दिनुहोस्।
यदि कसैले तपाइँसँग विवेकी भइरहेको छ र तपाइँलाई 'बधाई' दिँदै हुनुहुन्छ जुन वास्तवमा थोरै-घुम्टो लगाइएको छ, तब यसको सामना गर्ने उत्तम तरिका भनेको ठीक विपरित गर्नु हो।
तिनीहरूलाई वास्तविक प्रशंसा दिनुहोस् जब तपाईंलाई लाग्छ कि ती उहाँहरू योग्य हुनुहुन्छ। यदि तिनीहरू साँच्चिकै, दयालु र सोचविचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, उनीहरूले तपाईंलाई रिसाउन जारी राख्न गाह्रो हुन्छ।
जब ईर्ष्यालु व्यक्तिहरूको कुरा आउँदछ, सबैभन्दा उत्तम कार्य भनेको अरूलाई के गर्नु हो उनीहरूले तपाईंलाई के गर्न चाहन्छन् र उनीहरूको लागि उदाहरण अनुसरण गर्नुहोस्।
यस तरिकाले, तपाईं उनीहरूलाई कसरी व्यवहार गर्ने सिकाउनुहोस् ।
२ उनीहरूलाई आफ्नो काम गरिरहेको बेला प्रोत्साहन दिनुहोस्।
नक्कल ईर्ष्याको एक ठूलो अंश हो, तर यदि तपाईंले कसैलाई यो व्यवहार देख्नुभयो भने, यस मामलामा हेडलाई सम्बोधन गर्नु कार्यको उत्तम मार्ग नहुन सक्छ।
यससँग व्यवहार गर्ने राम्रो तरिका भनेको उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु हो जब उनीहरू तपाईलाई नक्कल गर्दैनन् तर आफ्नै खुट्टामा उभिरहेका हुन्छन् र आफ्नै ट्रेलमा बल्दैछन्।
यसले उनीहरूलाई थोरै आत्मविश्वास बढावा दिन्छ र उनीहरूले के गरिरहेको छ भन्ने बारे कुनै श .्कालाई कम गर्दछ।
The. प्रलोभनमा नउठ्नुहोस्।
यदि उनीहरूले यो संकेत गर्दै छन् कि तपाईंको उपलब्धिहरू तपाईंको गुणमा तल छैनन् तर भाग्य वा तपाईंको नियन्त्रण बाहिरका परिस्थितिहरूमा, प्रलोभन नलिनुहोस्।
तपाईंलाई थाहा छ किन तपाईंलाई राम्रो चीजहरू दिइन्छ जुन तपाईंलाई भयो, र तपाईंले आफूलाई कसैको लागि न्यायको आवश्यक पर्दैन।
र जति तपाईंले प्रयास गर्नुहुन्छ, त्यत्ति देखिन्छ कि तपाईंले सत्यलाई बढाइचढाइ गर्नुहोला।
त्यस्तै प्रकारले, यदि एक ईर्ष्यालु व्यक्ति अभिव्यक्त व्यवहार गर्दछ वा तपाईंलाई उठाउने प्रयास गर्दछ भने, तिनीहरूसँग निराश नहुनुहोस्।
Ast. घमन्ड नगर्नुहोस्।
तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको चीजहरूको बारेमा नम्र हुनुहोस्।
जब तपाइँ तपाइँको राम्रो भाग्य र तपाइँको सबै मेहनत को लागी भुक्तानी को बारे मा केहि मानिसहरु घमण्डी को रूप मा व्याख्या गर्न को लागी चाहानुहुन्छ, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ तपाइँ साथीहरु संग यो गर्नुभयो जो तपाइँको उपलब्धिहरु मा खुशी हुनेछ।
Them. तिनीहरूलाई सम्झाउनुहोस् कि यो प्रतिस्पर्धा होइन ।
स्वाभाविक ईर्ष्यालु व्यक्तिको लागि, सबै एक प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तर तिनीहरू प्रायः यसलाई महसुस गर्दैनन्।
यदि उनीहरूले तपाईंलाई कुनै तरिकामा कुटपिट गर्ने बारेमा घमण्ड गर्छन् भने, उनीहरूलाई शान्तपूर्वक सम्झाउने प्रयास गर्नुहोस् कि तपाईंहरू एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्न।
जब उनीहरूले तपाईंलाई उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उस्काउने कोशिस गर्छन्, लामो सास फेर्नुहोस् र एक कदम पछि। यसको माथि उठ्नुहोस्, र तिनीहरूले चाँडै प्रयास गर्न रोकिनेछ।
Them. यसको बारेमा उनीहरूसँग कुरा गर्नुहोस्।
यदि तपाईंलाई थाहा छ कि उनीहरूले तपाईंको बारेमा अफवाहहरू फैलाइरहेका छन् वा उनीहरूले उनीहरूको ईर्ष्यालु व्यवहारको साथ सामान्य रूपमा स .्घर्ष गर्दछन्, तब तपाइँले कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ भनेर इमानदार कुराकानीको लागि तिनीहरूलाई बस्नु उचित हुन्छ।
केवल यकिन गर्नुहोस् कि तपाईं शान्त र एकत्रित हुनुहुन्छ।
उनीहरूलाई उनीहरूको व्यवहारको बारेमा पूर्ण ज्ञान हुँदैन र तिनीहरूलाई इशारा गर्दै तिनीहरूलाई हुन सक्छ गर्न गाह्रो कुराकानी , तर यो कुञ्जी चीजहरू बदल्ने कुञ्जी हुन सक्छ।
के तपाईंको जीवनमा ईर्ष्यालु व्यक्ति छ?
ईर्ष्यालु व्यक्तिको चिह्नहरू पहिचान गर्न र परिस्थितिको सामना गर्न कदमहरू चाल्नाले तपाईं दुबैलाई ठूलो फरक पार्न सक्छ, परिस्थिति जस्तोसुकै भए पनि।
यसले थोरै समय र धैर्य लिन्छ।
एक साथी को लागी कविता जसले एक मायालु गुमायो
हामी किन छुट्टिन्छौं र सँगै फर्कन्छौं
मानिसहरु किन नजिक भए पछि टाढा जान्छन्?
चीजहरु गर्न को लागी जब तपाइँ बोर र एक्लै हुनुहुन्छ
के लक्ष्यहरु तपाइँको लागी सेट गर्न को लागी
कसरी क्रोध र कटुता माथि प्राप्त गर्न
कपाल संग wwe केन मास्क